Efa navoaka ny Fedora 36 ary misy fiovana be dia be, jereo izy ireo! | Avy amin'ny Linux
Darkcrizt | 11/05/2022 01:55 | Fitsinjarana
Rehefa afaka volana maro ny fampandrosoana ny fanombohana ny ny kinova vaovao amin'ny fizarana Linux "Fedora 36" version izay misy fiovana lehibe maro natao, izay, ohatra, ny fanavaozana ny singa rafitra isan-karazany.
Ary izany no ao Ny Fedora Workstation dia nohavaozina ho GNOME version 42, izay manampy lamin'asa maizina manerana ny tontolo iainana eo anoloana ary nanova rindranasa maro hampiasa ny GTK 4 sy ny tranomboky libadwaita, izay manome widgets sy zavatra ivelan'ny boaty hanaovana rindranasa mifanaraka amin'ny tolo-kevitry ny GNOME HIG vaovao ( Torolàlana momba ny fifandraisan'ny olombelona). Ny ankamaroan'ny fampiharana dia novolavolaina araka ny torolàlana GNOME HIG vaovao, fa ny sasany dia manohy mampiasa ny fomba taloha na manambatra singa amin'ny fomba taloha sy vaovao.
Ho an'ny rafitra misy mpanara-maso tompon'ny NVIDIA, Wayland protocol based GNOME session dia alefa amin'ny alàlan'ny default, izay nampiasaina teo aloha rehefa mampiasa mpamily loharano misokatra. Ny fahafahana misafidy fivoriana GNOME mandeha eo an-tampon'ny mpizara X nentim-paharazana dia voatazona. Teo aloha, ny fampidirana Wayland amin'ny rafitra miaraka amin'ny mpamily NVIDIA dia voasakana noho ny tsy fisian'ny fanohanan'ny OpenGL sy Vulkan hardware acceleration amin'ny rindranasa X11 mandeha miaraka amin'ny singa XWayland DDX (Device-Dependent X). Ao amin'ny sampana vaovaon'ny mpamily NVIDIA, dia raikitra ny olana ary ny fampisehoana OpenGL sy Vulkan amin'ny rindranasa X natomboka tamin'ny XWayland dia saika tsy misy hafa noho ny mandeha amin'ny mpizara X mahazatra.
Ao amin'ny fanontana atomika azo havaozina an'ny Fedora Silverblue sy Fedora Kinoite, izay manolotra sary monolithic GNOME sy KDE izay tsy fonosina na namboarina miaraka amin'ny rpm-ostree toolkit, nohavaozina mba hametrahana ny /var hierarchy ao amin'ny subkey Btrfs mitokana, mamela ny sary avy amin'ny / var votoaty ho voafehy tsy miankina amin'ny fizarazarana rafitra hafa.
rehefa mandeha ny systemd, aseho ny anaran-drakitra fiara, izay manamora ny famaritana ny serivisy atomboka sy atsahatra.
La safidy ny algorithm encryption azo atao hita ao amin'ny GnuTLS voarakitra anaty lisitra fotsy izao, izany hoe, ny algorithm navela dia voamarika mazava fa tsy manilika ireo tsy mety. Ity fomba fiasa ity dia mamela, raha tiana, hamerina ny fanohanana ireo algorithm kilemaina ho an'ny fampiharana sy dingana sasany.
Fanampiana fanampiny amin'ny rakitra sy tranomboky azo tanterahana amin'ny endrika ELF momba ny fonosana rpm misy ny rakitra nomena. systemd-coredump dia mampiasa ity fampahalalana ity mba hanehoana ny dikan-teny fonosana rehefa mandefa fampandrenesana fianjerana.
ny mpamily fbdev ampiasaina amin'ny famoahana framebuffer nosoloin'ny mpamily simpledrm, izay mampiasa ny framebuffer EFI-GOP na VESA nomen'ny firmware BIOS na UEFI ho an'ny famoahana. Mba hiantohana ny fifanarahana mihemotra dia misy sosona iray ampiasaina haka tahaka ny fitaovana fbdev eo an-tampon'ny subsystem Direct Rendering Manager (DRM). Ny fiovana dia miavaka amin'ny fandaozana ny mety hampiasana mpamily DRM/KMS ihany. Ny dingana fampidirana mpamily fbdev vaovao amin'ny kernel Linux dia natsahatra 7 taona lasa izay ary ny mpamily sisa dia mifandray amin'ny fanohanan'ny hardware lova.
Fanampiana mialoha ho an'ny kaontenera amin'ny endrika OCI/Docker mankany amin'ny stack fanavaozam-baovao atomika mifototra amin'ny rpm-ostree, manamora ny famoronana sary kaontenera ary mandefa ny tontolon'ny rafitra mankany amin'ny kaontenera.
Amin'ireo fanovana hafa misongadina:
Ny rakibolana Hunspell dia nafindra avy amin'ny /usr/share/myspell/ ho /usr/share/hunspell/.
Ny fahafahana mametraka dikan-teny samihafa amin'ny compiler amin'ny fiteny Haskell (GHC) miaraka dia omena.
Ny maody kabine misy interface tsara amin'ny Internet dia tafiditra ao anatin'ny firafitry ny fizaràna rakitra amin'ny alàlan'ny NFS sy Samba.
Ny fampiharana Java default dia java-17-openjdk fa tsy java-11-openjdk.
Nosoloana plocate ny programa hitadiavana rakitra haingana antsoina hoe mlocate, analogue haingana kokoa ary tsy mandany kapila.
Natsahatra ny fanohanan'ny stack Wireless taloha ampiasaina amin'ny mpamily ipw2100 sy ipw2200 (Intel Pro Wireless 2100/2200), ary nosoloina ny stack mac80211/cfg80211 tamin'ny 2007.
Ao amin'ny installer Anaconda, ao amin'ny seha-pifandraisana hamoronana mpampiasa vaovao, dia alefa amin'ny alàlan'ny default ny boaty fanamarinana mba hanomezana zon'ny mpitantana ny mpampiasa ampiana.
Ny fonosana nscd, izay nampiasaina hametahana ny angon-drakitra mpampiasa sy mpampiantrano (/etc/hosts, /etc/passwd, /etc/services, sns.), dia tsy ampiasaina intsony. Ny Systemd-resolved dia ampiasaina amin'ny caching mpampiantrano, ary ny sssd dia ampiasaina amin'ny caching database mpampiasa.
Raiso ny Fedora 36
Fedora Workstation, Fedora Server, CoreOS, Fedora IoT Edition ary Live build dia vonona ny alaina, atolotra amin'ny endrika spins miaraka amin'ny tontolo desktop KDE Plasma 5, Xfce, MATE, Cinnamon, LXDE ary LXQt. Ny fananganana dia natsangana ho an'ny rafitra x86_64, Power64, ARM64 (AArch64), ary fitaovana isan-karazany miaraka amin'ny processeur ARM 32-bit. Nahemotra ny famoahana ny fananganana Fedora Silverblue.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Efa navoaka ny Fedora 36 ary misy fiovana be dia be, jereo izy ireo!